WordPress को एकाधिक उदाहरणहरूको प्रबन्ध गर्नुहोस्WW | Martech Zone
सोमबार, जनवरी 21, 2013 Douglas Karr
हामीले शाब्दिक रूपमा गत हप्तामा more थप WordPress क्लाइन्टमा हस्ताक्षर गरेका छौं र माग बढ्न जारी छ। जब हामी हाम्रो ग्राहकहरूको साइटहरू प्रबन्ध र निरन्तर रूपमा जारी राख्छौं, यो समय आइसकेको छ कि हामीले प्रणालीको खोजी गर्न सुरु गर्यौं यसलाई अधिक प्रभावकारी बनाउन। प्रबन्धन WP सबै समावेशी वर्डप्रेस प्रबन्धन कन्सोल हो जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई पूर्ण शक्ति र सम्भव नियन्त्रण प्रदान गर्दछ जुनसुकै सiest्ख्यामा सजिलो तरीकाले वर्डप्रेस साइटहरूको प्रबन्ध गर्नमा पूर्ण नियन्त्रण गर्दछ।
प्रबन्धन WP सुविधाहरू
एक क्लिक पहुँच - तपाईको सबै WordPress साइटहरू प्रबन्ध गर्न सहज ज्ञान युक्त एक क्लिक पहुँच।
सजिलो व्यवस्थापन - समीक्षा गर्नुहोस् कुन WordPress साइटहरूमा थिमहरू र प्लगइनहरू छन् जसमा ध्यान आवश्यक पर्दछ। र एक क्लिकको साथ, तपाइँका सबै प्लगइनहरू र थिमहरू अद्यावधिक हुन्छन्।
खाली निगरानी - प्रीमियम अपटाइम निगरानी उपकरणहरूको साथ, तपाइँ यो निश्चित गर्नुहुन्छ कि तपाइँको WordPress साइटहरू सहज रूपमा चल्नेछ ताकि तपाइँको व्यापार पूर्ण क्षमतामा कार्य गर्न जारी राख्न सक्दछ। तर यदि केहि गलत भयो भने, तपाईं पहिलो हुनुहुनेछ।
ट्राफिक सतर्कताहरू - के कसैले तपाईंलाई लिंक गरीएको छ? के तपाईंको भर्खरको पोस्ट भाइरल भएको छ? के तपाइँको साइट स्प्याम बट्स द्वारा आक्रमण भइरहेको छ? हाम्रो शक्तिशाली सचेत उपकरणको साथ, तपाईं ट्राफिक स्पाइकहरू मोनिटर गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अब तपाईं निश्चित अवसरहरूको फाइदा लिन निश्चित हुनुहुन्छ।
एसईओ विश्लेषण - किन महँगो एसईओ प्याकेजहरूमा पैसा खर्च गर्ने? हामी अतिरिक्त लागत बिना शक्तिशाली एसईओ विश्लेषण उपकरणहरू समावेश गर्दछौं। तपाईं कहाँ उभिनुहुन्छ भनेर जान्नको लागि यो जानकारी प्रयोग गर्नुहोस्, र तपाईंको खोज इञ्जिन श्रेणीकरण सुधार गर्न यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
Google विश्लेषण - तपाईंको साइटको प्रदर्शनमा चेक इन गर्नु हाम्रो गुगल एनेलाइटिक्स एकीकरणको साथ एक ब्रीज हो। तपाइँको वर्डप्रेस साइटहरू लिनु पर्ने निर्देशनहरूको बारेमा सूचित निर्णयहरू लिनुपर्ने सबै महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईलाई सँधै उपलब्ध हुन्छन्।
टैग: WordPress प्रबन्धन गर्नुहोस्WordPress
जनवरी 21, 2013 5:00 बजे
तिमीलाई सोमबार खुसी!
मलाई तीन दिनको सप्ताहन्त मनपर्छ - र केहि ब्लग पढाइमा समात्दै।
आशा छ कि यसले तपाइँलाई अति राम्रो गर्दै र केहि आराम र घामको आनन्द लिइरहेको पाउनुहुनेछ!
Ciao ciao अहिलेको लागि ~
PS याद गर्नुहोस्, TEEN WEEK फेब्रुअरी 1 मा सुरु हुन्छ र उपहारहरू विशाल र सेलिब्रेटीले लिखित किशोर पोस्टहरू हुन्!